Dingana iray lehibe no vitan’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny sampandraharahan’ny firenena mikambana ho an’ny ankizy (UNICEF) mba hanatsarana ny fahasalaman’ny vahoaka malagasy, indrindra ireo zaza, ny 5 martsa 2019. Tobim-pahasalamana 500 amin’ireo 2.660 ao anatin’ny distrika 77 manerana an’i Madagasikara no hisitraka fitaovam-pangatsiahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro mba hanamafisana ireo dingana fitehirizana vakisiny amin’ny maripana tokony ho izy. Ankizy an-tapitrasany no ho voavonjy noho ireo fitaovam-pangatsiahana ireo. «Miteraka fahasahiranana ny mampiasa ny fitaovam-pahatsiahana mandeha amin’ny solitany satria manani-sarotra ny fitadiavana solitany rehefa lany indrindra raha miasa irery. Eo ihany koa ny fahasarotan’ny fitadiavana fitaovana raha misy fahasimbana. Ary indrindra ny faharatsian’ny kalitaon’ny solitany misy”, hoy ny fitarainan’ny lehiben’ny tobim-pahasalamana irery ao Morondava faha -II.
Amin’ireo tobim-pahasalamana hahazo anjara dia miisa 400 ireo mbola mampiasa solitany ary ny 100 amin’izy ireo no tsy manana mihitsy. Sarotra ho an’ireto farany ny manatanteraka irery ny fanaovam-baksiny noho ny tsy fisiana angovo. Miisa zato mahery ireo tobim-pahasalamana any amin’ny tany saro-dalana indrindra rehefa fahavaratra.
Ny UNICEF no hiandraikitra manontolo ny fividianana ireo fitaovana ireo hatramin’ny fanaterana izany any ifotony, ary indrindra ny fanofanana ireo mpiasan’ny fahasalamana. Mitotaly 4 500 000 tapitrisa dolara ny tombabidin’ireto fitaovana vaovao ireto. Ny 80 isan-jato dia famatsiam-bola avy amin’ny GAVI ary ny fanjakana kosa no niantoka ny 20 isan-jato.
“Hetsika fanombohana ihany ity androany ity, izay izay hitohy mandritra ny taona maro mba hanoloana ireo fitaovana fampangatsiahana mandeha amin’ny solitany, ary hampiasana fitaovana tsy mandany angovo”, hoy Andriamatoa Michel Saint-Lot, solontena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara.
‹ FANONDRANANA ENTANA ANY AMERIKA: Ilaina ny fifehezana ny fenitra takiana	› SECOURS ISLAMIQUE FRANCE: 2066 ménages du district de Morombe ont reçu des denrées alimentaires